Sheekada filimka Deadpool 2: qaybtii hore iska hilmaan Action iyo mada daalo dhameestiran ugu imaaw – Filimside.net
Shirkada Marvel wey soo laabatay waxayna markaan la timid filimka Super Hero-ga la wada jaceyl yahay Deadpool qaybtiisa labaad.
Xiliga la daawanayo :18 May 2018
Shirkada soo saartay :Marvel Studios
Qarash gareeye :Ryan Reynolds, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg
Jilaayaasha : Ryan Reynolds, Josh Brolin, T.J. Miller, Morena Baccarin
Fariintiisa :Action , Comedy , Fantasy
Qiimeynta sheekada filimka: 4/5 (afar xidig)
Hordhaca filimka Deadpool 2: Ryan Reynolds wuxuu Hollywood-ka ku qabsaday doorkiisii hirgalay ee shirkada Marvel u sameesay filimka Deadpool sanadii 2016 wixii markaas ka dambeeyay qof walbo wuxuu sugaayay in mashrucaan qayb labaad laga sameeyo haatan ayaana laga sameeyay.
Fariinta Filimka Deadpool 2 Oo Kooban: Markaan shirkada Marvel waxay ku dadaashay Deadpool 2 inuu noqdo mashruuc Action, mada daalo dhameestiran iyo ficilo qayaali maangal ah leh.
Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) oo inta badan xumaan caan ku ahaa markaan wuxuu markaan tababar siinayaa kooxda ‘X-Men’.
Wade Wilson/Deadpool (Reynolds) asigoo tababarka ku guda jiro wuxuu la kulmaa Russell/Firefist (Julian Dennison) wiil yar oo dhib badan balse hida side ahaan bini aadanka ka duwan.
Laakiin wiilkan yar waxaa u gaarsado noloshiisana halis ku ah noloshiisa askariga Terminator-ka ah ama kumbuyuutarka ah ee aan laga guuleesan karin sidoo kalena xaasid ah Cable (Josh Brolin).
Sidaa darteed Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) oo xumaanta caan ku ahaa markaan wuxuu noqonaa qof wanaag u taagan sidoo kalena ka go’an tahay wiilka yar inuu ka bad baadiyo bahalka aan nixin Cable (Josh Brolin).
Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) nolol adag ayuu dhexda ka galaa asigoo caddow badan sameesanayo balse hadafkiisa ugu weyn waa inuu bad baadiyo wiilka yar ee dhibaatada u nugul.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Deadpool 2: Haddii aad ka heshay qaybtii kowaad taxanahan waa qasab midkaan inaad kasii heli doontid madaama shactirada, Action-ka iyo qayaaliga loo badiyay waxayna kooxda filimkaan ku guuleesteen inay la imaadaan mashruuc dhameestiran oo aan laga xiiso dhigeyn.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan Ryan Reynolds sida uu filimkaan u matalay waa mid ku wanaagsan Action-ka, shactirada iyo sameynta wax walbo oo Super Hero looga baahan yahay.
Waad iska hilmaami doontaa doorarkiisii Classic ahaa ee uu filimada GREEN LANTERN (2011) iyo DEADPOOL (2016) ku matalay waxaadna u noqon doontaa taageero buuxo Ryan Reynolds marka aad Deadpool 2 daawatid.
Josh Brolin iyo doorkiisa xumaanta waa mid siweyn kuu xiiso galinaayo gaar ahaan sida uu Deadpool ula dagaalamayo iyo kartida dheeraadka ah ee la siiyay.
Julian Dennison isagana doorkiisa wuu wacan yahay sidoo kalena horey u socodka sheekada Deadpool 2 udub dhexaad ayuu u yahay.
Gunaanad: Hollywood-ka waxay la imaanayaan sanadkaan aflaan heer sare ah oo dhan walbo ka dheeli tirin waxaa weli la xasuustaa ganacsigii ay sameeyeen Black Panther iyo Avengers – Infinity War ku waas oo sheeko ahaan aad looga helay.
Markaana Deadpool 2 ayaa liiskaas ku biiri doono madaama shirkada Marvel filimkaan u yeeshay fariin walbo oo daawadayaasha siweyn usoo jiidan karto.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Deadpool 2: